Wasiirrada Beeraha Soomaaliya iyo Turkiga oo kala saxiixday heshiis iskaashi – Balcad.com Teyteyleey
Wasaaradaha Beeraha Somaaliya iyo Turkiga ayaa kala saxiixday heshiis ku saabnsan wax soo soorka Soomaaliya gaar ahaan sidii loo kobcin lahaa qudaaarta laga soo saaro dalkeena.
Labada dowladood waxaa heshiiska u kala saxiixay Saciid Xuseen Ciid Wasiirka Wasaarada Beeraha Soomaaliya, halka dowlada Turkiga uu u saxiixay Dr. Ahmed Eşref oo ah Wasiirka Beeraha Turkiga.
Heshiiskan ayaa irdaha u faraya iskaashi buuxa oo labada dal ay ka yeeshan dhinaca beeraha, iyadoo uu xoojanayo taageero dhic walbo ah oo dowladda Turkigu ku baxiso Beeraha Soomaaliya sida dhanka ticnoolojiyada ee beeraha dib u dhiska kaabayaasha Abuurka.
Qodobada muhiimka ah ee ku jira heshiiska ayaa waxaa ka mid ah sidii ganacsiga wax soo saark beeraha ay iska kaashadaan labada dal.
Dhinca kale wafdiga uu hohaaminayo Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Saciid Xuseen Ciid ayaa booqday Xarunta Cilmi baariska, Sheybaarka iyo tababarrada beeraha ee Wasaarada beeraha Turkiga.
Wafdiga Wasiirka Beeraha oo maalmahan ku sugan wadanka Turkiga ayaa waxaa qeyb ka ah mas’uulayiin ka tirsan Wasaarada Beeraha iyo Safaiirka Dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, iyadoo heshiiska uu muhiimad gaar ah u leeyahay Dalkeena.
The post Wasiirrada Beeraha Soomaaliya iyo Turkiga oo kala saxiixday heshiis iskaashi appeared first on Ilwareed Online.
Jarmalka oo dhaqaalihii ugu badnaa ku bixinayaa ammaanka Soomaaliya